‘’’’ Horseedfc.net’’’ Real Madrid oo la soo wareegi doonto xidiga Andre Gomes. – Horseed Sports Club
‘’’’ Horseedfc.net’’’ Real Madrid oo la soo wareegi doonto xidiga Andre Gomes.
Real Madrid ayaa go’aan ka qaadan doonnto maalmaha soo aadan xiisaha ay u qabto xidiga khadka dhaxe kaga ciyaara Valencia Andre Gomes, Sida ay qoreyso Marca.
Gomes, 22-sano jirkaan ayaa kusoo baxay doorasha dooqa koowaad ee Real Madrid iyadoo damacsan inee kuxoojiso khadkega dhaxe xagaaga cusub, Real Madrid iyo Valencia wali ma yeelan wax wado hadal ah,
Xidigaan xulkiisa kula guuleystay European Chmapionship ayaa rajo fiican kaqaba, Inkastoo xidigan ay u furantahay go’aan ah inuu u dhaqaaqo Bernabeu, Madrid ayaa rumeesan Gomes inuu ka garab ciyaari karo Paul Pogba kaas oo asigana ah bartilmaameyd kale ay Real xiiseyneesa.
Valencia ayaa si rasmi u sheegtay Gomes inuusan iib eheen, Laakiin Marca ayaa warineysa inee Valencia iska iibin doonto xidigaan hadii lasoo bandhigo qiimo macquul gal ah, Iyadoo markaas ay ku adkaan doonto inee xidigaan ceshato, Valencia ayaa xaalad dhaqaale kujirta iyadoo xidigaan kudiri karta £65milyan.
Juventus ayaa Valencia usoo bandhigtay €40milyan inee kula wareegto Gomes inkastoo laga soo diiday dhowr isbuuc ka hor,
Xidigaan khad dhaxe ka ciyaara waxaa kuwada loola maayo kooxaha ugu waa weyn ee yurub, Real Madrid, PSG, Juventus, Chelsea , Man United Iyo Barcelona ayaa xidigaan si wada jir ah u wada doonaayo, Inkastoo Valencia ay iska soo diiday dhowr dalab oo kaga yimid kooxahaani.